Iintengiso kwiphepha lasekhaya? | Martech Zone
NgoLwesine, Novemba 22, 2007 NgoMgqibelo, ngoJuni 27, 2015 Douglas Karr
Imbono yinyani. Ndihlala ndikholelwa ukuba, ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, ukuba oku kuyinyani. Umbono womqeshwa yinyani yohlobo lwenkampani okanye umphathi abasebenzelayo. Umbono wentengiso yindlela esitokhwe ngayo. Umbono womthengi wakho uphumelele kangakanani kwinkampani yakho.
Uluvo lwempumelelo yebhlog yindlela yokwenza ngayo imali kakuhle.
Njengokuba ndijonga ngeenxa zonke kumnatha, kukho abathile ungakholelwa ekwenzeni imali kwibhlog yabo, yaye ezinye ukuba do. Njengoko ndibonile nganye yezi ndawo ziguqula izitayile zazo kwaye zongeza ezinye izibhengezo, ukufundwa kwazo kukhulile njengoko kwenza umvuzo wazo.
Ngaba unokukhetha iarhente yokuthengiswa kwezindlu eqhuba iCadillac okanye iKia?
Mhlawumbi akunjalo. Imbono yinyani. Nangona indawo yam isakhula ngempumelelo, yayilixesha lokuba ndenze into yokuphumelela kwinqanaba elilandelayo. Iinkampani ezininzi ziya zisondela kum ukuba zibhengeze indawo yam kwaye bendingenalo igumbi, okanye inkqubo eyaneleyo yokugcina ezo ntengiso. Ke-ndenze umsebenzi kumxholo.
Ndenze umsebenzi ononophele kakhulu kumxholo, nangona. Ndifuna ukubonelela ukubekwa kakuhle kwezo nkampani zazinqwenela ukuxhasa indawo, kodwa andifuni ukuphazamisa umxholo. Uninzi lweeblogi zokwenza imali endizibonayo ngokwenyani ibhloko indlela yabafundi eya kumxholo wentengiso. Ndiyakholelwa ukuba oko kuyaphazamisa kwaye akufuneki. Ngokwam ndiyakudelela ukuskrolela kwiintengiso zomxholo, ndiye ndasebenzisa umthetho wegolide xa ndiphumeza iintengiso kwibhlog yam.
Iintengiso zii-125px eziqhelekileyo nge-125px, umgangatho olungileyo kwiintengiso kwaye ufumaneka ngobuninzi kwi Commission Junction kwaye Cofa kabini. Xa isikhundla singasetyenziswanga ngumxhasi wokwenyani, ndingasigcwalisa ngentengiso evela kwenye yezi nkonzo okanye ngentengiso engenanto.
Ukuba oku kuyakucaphukisa, ndiyathemba ukuba andizukulahlekelwa ngumfundi. Inkqubo ye- feed RSS uhlala unomxhasi omnye emazantsi ayo, kodwa uya kufumana intengiso encinci apho. Nceda uyazi ukuba ndihlala ndibajongela phantsi abathengisi. Kule veki ndiye ndacelwa ngumntu ofuna ukundibhatala kakuhle ukubeka intengiso phezulu. Xa ndenza uphando (aka: Google), ndafumanisa ukuba badelile kwi-Intanethi ngokubeka i-adware kunye ne-spyware. Ndiyabazisa ukuba andizukuxhasa umbutho osebenzise iindlela zobuqhetseba ezinje.
Inqaku lokugqibela, abahlobo bam bahlala bethetha malunga 'nokudubula okuhle' kwintloko yam. Umntu wade wayifumana kubi ngayo. Imbono yinyani, ndiye ndathatha umfanekiso wam phezolo ngekhamera yeMacBookPro iSight ndaza ndayifota ngentloko. Yile ndlela uninzi lwenu lundazi ngayo… ingwevu nokumomotheka!
tags: Indawo yentengisoKwiintengisointengisointengiso yekhasi lasekhayaintengiso yewebhu
Novemba 22, 2007 ngo-3: 12 PM
Ukujonga kakuhle uDoug! Unyanisile, ezo ntengiso aziphazamisi kangako. Kwaye ndiyayithanda indlela entsha. Intsha kakhulu.
Novemba 22, 2007 ngo-4: 52 PM
Ngokwesiqhelo bendifunda ibhlog yakho nge-RSS, kodwa namhlanje kuye kwafuneka ndijonge kuyilo kwakhona.
Hmm ... kum ngoku ijongeka ngathi igcwele, kwaye ngakumbi ukukhanya kwe-flash ads kuyinkathazo kufundo olujolisiweyo. Bahlala bezama ukuthatha ingqalelo kwisicatshulwa.
Ngelixa ndingachasani nokwenza imali ibhlog, ndiyakuxhasa ukunika isicatshulwa indawo yaso. I-whitespace ngumhlobo, kwaye ayisiyiyo into ekufuneka izaliswe ziintengiso.
Ngokubhekisele kwifoto yakho, ndicinga ukuba ingazuza kwigumbi elimnyama ledijithali (aka. Photoshop okanye efanayo) umsebenzi. Imibala ibonakala ibuthathaka, kwaye kukho into engaqhelekanga kwicala lasekunene, eyenza ubuso bakho bukhangeleke bukhulu. Kananjalo kubonakala ngathi awujonganga ngqo kwikhamera, ngaphandle nje kancinci. Kunye nebrashi emhlophe ejikeleze intloko yakho, oku kunika i-eery, imvakalelo efana ne-guru.
Ndiza kuphinda ndithathe ifoto kunye nehempe ehambelana nombala webhlog yakho. Shoot portrait ngelensi ende, nika umahluko ngakumbi. Mhlawumbi ilitha elincinci, ukuze ukhanyise emehlweni akho.
Novemba 22, 2007 ngo-6: 08 PM
Umbulelo owonwabileyo, uDoug. Ndiyithandile imbonakalo yakho ebukekayo, kodwa ndiyayithanda nefoto entsha, ngokuqinisekileyo ibonakalisa uncumo lwakho. Ndiyayithanda ifomathi entsha, nayo. Ndingazihoya iintengiso ukuba ndiyafuna, okanye ndijonge kubo ukuba ndiyafuna, yindlela ekufanele ukuba ibenjalo.
Novemba 22, 2007 ngo-10: 52 PM
Usuku olumdandi lokubulela!
Ngokwenene bubuchule obuhle obamkele apha. Kutheni ungasebenzisi iadserver? Ndiqinisekile ukuba abathengisi bakho banokulandela umkhondo konqakrazo lwabo 🙂
Nov 23, 2007 kwi-12: 02 AM
Hey Doug, uxolo malunga nevidiyo kwi-Google feed .. * oops *
Ndiyabona ukuba unezithuba zentengiso ezikhoyo. Benza ntoni? Ndidubule i-imeyile xa unethuba.
Ndinevidiyo eza kwenza imali eninzi ngakumbi kuneJaime's $ 70,000 kwintengiso yeencwadi eyamvumela ukuba aphumelele i-Intanethi elandelayo ye-Intanethi.
Jonga xa unethuba.
Lumnandi usuku lweTurkey!
Nov 24, 2007 kwi-11: 58 AM
Iphepha leNtengiso ngoku liphezulu!
Ndiqinisekile ukuba ndiyayibamba ividiyo, ndingumlandeli omkhulu webhlog yakho.
Enkosi! Kwaye ndiyathemba ukuba ube nexesha elimnandi leeholide!
Umtyali mali wepropathi
Nov 23, 2007 kwi-11: 16 AM
Olu lutyelelo lwam lokuqala kwindawo yakho ukuze ndingabinakho ukuphawula kulwakhiwo lwakho oludala. Ndiyaluthanda ubeko lwakho olutsha nangona, lukhangeleka lucocekile kwaye lucocekile ngaphandle kwentengiso eninzi.
Andiqinisekanga ngokuba nomfanekiso wakho kwibhlog yakho nangona. ndicinga ukuba kuyenza ibe ngamava ngakumbi ukuba abafundi bakho banokubona ukuba ungubani.
Ndiyathemba ukuba ungazalisa amabala entengiso kwikholamu yasekhohlo kungekudala!
Novemba 23, 2007 ngo-12: 35 PM
Hee Doug, ndicinga ukuba ubeko olutsha lubukeka luhle. Khange ndibenangxaki no "bumnandi" bakho, kodwa entsha intle nayo.
Gcina umsebenzi omkhulu!
Novemba 23, 2007 ngo-5: 18 PM
Yenza utshintsho oluncinci- ezinye bezisekwe kwingxelo:
Ifoto ifotwe ngombala othile emfanekisweni.
Ithumele i Iphepha leentengiso
Inye into onokuthi ungayiboni kukuba khange ndisebenzise naliphi na ibhlog xa ndiyila olu lwakhiwo.
Ngapha koko, owona mxholo ubanzi kancinci. Ndisandula ukwandisa ububanzi bolwakhiwo lwangoku. Ndinciphisile nobungakanani bentloko ukuze abantu bakwazi ukufikelela kumxholo ngokukhawuleza.
Enkosi ngokundazisa ukuba ucinga ntoni!
Nov 24, 2007 kwi-7: 41 AM
Isenokungathethi lukhulu kuwe, kodwa undilahlile njengomfundi. Kudala ndiziva ndigula ngokukhululeka ngenxa yokurhweba rhoqo kwiwebhu kunye neeblogs ngokubanzi kwaye ndicinga ukuba lixesha lokuba ndiqalise ukwahlula ubudlelwane bam kuloo nxalenye ye-intanethi. Ke, ewe, ndlelantle ndiyaqikelela; Ndikonwabele ukuhlala kwam apha, kodwa okwangoku ndiva ikhubalo litshoniswe sisithonga sokucela imali. '
Nov 24, 2007 kwi-11: 56 AM
Ndiyabulela ngokundazisa kwaye ndiyaxolisa ngokuhamba kwakho. Andibongozi nakubani na ukuba andinike imali, kodwa andicingi ukuba sisono ukubonelela ngeengcebiso ezininzi ngaphandle kweendleko kwaye ndizame ukwenza imali ngebhlog yayo ngokupheleleyo.
Ndicinga ukuba abanye abantu bacinga ukuba ndisisityebi okanye into esekwe kwimpumelelo yebhlog yam. Njengotata ongatshatanga wababini, omnye ekholejini, ndinokuqinisekisa ukuba andinguye. Ndikudidi oluphakathi oluqinileyo, andinakhaya (okwangoku), kwaye ndisebenza nzima ukugcina imali yokonga. Ukuba ndingafumana nje amakhulu ambalwa eedola ngaphandle kwebhlog yam inyanga nenyanga, ayizukuchitha kumakhaya eeholide okanye iimoto ezintle ... izakwenza ukuba ukuhlawula ikholeji yonyana wam kube lula.
Enkosi ngokuxhoma ixesha elide!
Novemba 24, 2007 ngo-5: 08 PM
Ndivumelana nawe kule Doug. Andiqondi ukuba abantu abanjengoMyk banokulindela iiblogi kunye nezinye iiwebhu ukuhambisa umxholo oluncedo ngaphandle kokwenza iirandi ezimbalwa.
Ukuba unguJohn Chow yinto enye-ngokuqinisekileyo uye wahamba kancinci kunye nezinye zezikimu zokwenza imali. Kodwa njengokuba usitsho kwingcaciso yakho ngasentla kukaDoug, ungutata ophakathi (njengam) ukuzama ukubeka unyana wakho kwikholeji. Ndiyawuqonda ngokupheleleyo kwaye ndiwuhloniphe umnqweno wakho wokwenza imali encinci kwibhlog yakho. Ngayo yonke imixholo emikhulu oyinike abafundi bakho, ufanele ubuncinci loo nto.
Nov 25, 2007 kwi-4: 41 AM
Okokuqala, uBrandon, abantu bathanda iMyk - boooh.
Bendizithethela mna ndedwa, ke ndicela ungandenzi ndibukeke ngathi ndenza ingxelo ngokubanzi.
Kuye nganye into yakhe bendizama ukuyithetha. Kodwa uyazi, ndivumelekile ukuba ndikhethe iiBlogs endizifundileyo kwaye ndingazenziyo, kwaye ndazise uDouglas ukuba kutheni.
Okokugqibela, bendizakukhetha iarhente yokuthengiswa kwezindlu engakhange indibuze ukuba ingaba ndizamile uphawu lwangoku lokuhlamba umlomo, okanye ukuba ndiyingcamle le soseji imnandi ngelixa ndizama ukundithengisela indlu -Kodwa, kwakhona, olo lukhetho lomntu siqu.
(Ndikwangutata, kwaye okwangoku ndizisa imali ekhaya, ngenxa yoko andiphikisani nokufumana imali, ndiyathandabuza ukuba le yeyona ndlela ilungileyo.)
Nov 25, 2007 kwi-6: 48 AM
Kuya kufuneka ndinamathele eDoug apha; utsho ukuba uyathandabuza ukuba intengiso yeyona ndlela ilungileyo yokufumana ingeniso esekwe kwimizamo ebalulekileyo etyalwe nguDoug kwibhlog yakhe, ukanti awunikezi ngcebiso ngesinye isicwangciso sokwenza imali. Ke ndicela umngeni kuwe Myk; ukuba le asiyondlela ichanekileyo malunga nokucebisa kuDoug indlela 'elungileyo', kwaye leyo ikwakhona ngokwezimali?
Nov 25, 2007 kwi-6: 50 AM
I-PS Ndihlala ndifumana ukuhlekisa okulusizi xa abantu bekhalaza malunga nezo zinto bazinikwa simahla. FWIW.
Nov 25, 2007 kwi-7: 06 AM
Uyabona, Mike, ndiyayiphikisa imbono yokuba iibhlog kufuneka zibe nesicwangciso sokwenza imali kukonke. Uxolo, injalo nje indlela enam. Akukho ncedo ekuphikiseni le ngongoma ngokwenene.
Kwaye ndiyathemba ukuba andikhange ndibone ngathi ndicebisa ukuba uDoug kufuneka atshintshe into ukwenzela mna. Akufanelekanga. Kuya kufuneka enze oko acinga ukuba kulungile yakhe blog.
Kwaye ngokufanayo, ndinelungelo lokukhetha ukuyithanda; okanye hayi, njengoko kunjalo apha.
Mhlawumbi izimvo zam ziye zamgweba, buqu. Ayisiyiyo le bendizama ukuyenza. Kuyinyani, andiyithandi indlela Iindlela zokwenza imali uye waya kwindawo ephambili kubloga. Ke ngoku, ukuba yile ndlela eya kuhamba ngayo le bhlog, kulungile. Ayisiyiyo le nto ndiyifunayo kubhloga kwaye ndicinga ukuba ndinelungelo lokwenza ngokweemvakalelo zam.
Malunga nokucela umngeni kum. Kulungile… masibone. Ndicinga ukuba kubalulekile ukwazi, ukuba andingomnye wabantu abafuna izinto simahla. Andikhupheli umculo, andikhupheli iimovie.
Oko utshilo. Ndingavuya ngovuyo ukuhlawula umrhumo wobhaliso wale bhlog (ngaphandle kokuba kunjalo, njenge- $ 300 ngenyanga). Ngoku, ndiyaqonda ukuba kuya kubakho umkhosi wabantu abakhalayo akhondlela kuba ikwi-intanethi kwaye isimahla.
Ewe, ewe. Kusimahla ukugcinwa kweentengiso ezicaphukisayo kunye ne-texlink popups yezinto Andizelanga apha.
Ngaba zikhona iintengiso kwiincwadi ozifundayo?
Andizithandi iintengiso kuthotho lwam lweTV. Yiyo loo nto ndithenga iiDVD. Andikuthandi ukuhlala isiqingatha seyure sentengiso ngaphambi kokuba i-movie iqale, yiyo loo nto ndithenga iDVD.
Ndiyavuma hayi kholelwa kuyo yonke into yasimahla ngexabiso lokumosha ibhlog yakho ngentengiso yomntu wesithathu embi.
I am ukulungele ukuchitha imali. Kuphela ndingathanda ukuyinika ngqo uDoug endaweni yokuhamba ngokungacacanga "cofa amajelo".
Nov 25, 2007 kwi-10: 59 AM
Ngokuqinisekileyo ndiyavelana nembono yakho kwaye ndiyakuxabisa ukunyaniseka kwakho. Xa abantu abanjengoFacebook noYouTube beqala inkqubo yokwenza imali, ndiqala ukukhupha amehlo.
Andizukuphikisa ukuba ngandlela thile 'yahlukile' kuba ibhlog yam-ndiphambi nje kokuba a) inokuvelisa imali ngakumbi kwaye ndingayisebenzisa! kwaye b) Ndicinga ukuba kukho umbono ngeeblogi zokwenza imali ukuba 'baphumelele'.
Inqaku lokugqibela: Iqhosha lam elithi "Ndithengele i-Starbucks" mhlawumbi lindenze malunga ne-25 yeedola kwezi nyanga zintandathu zidlulileyo- ke imizamo yam 'ethe ngqo' yokwenza imali ibiyinto nje ethile. 🙂
Ndiyathemba ukuba uhlala ujikeleze- uyakongeza kakhulu kwiincoko apha!
Novemba 25, 2007 ngo-1: 38 PM
Myk, bendingazami ukwenza uhlaselo lomntu, andiqondi nje into "yento engento".
Novemba 25, 2007 ngo-3: 31 PM
@Myk: Uyabona, Mike, ndiyayiphikisa into yokuba iibhlog kufuneka zibe nesicwangciso sokwenza imali kwaphela. Uxolo, injalo nje indlela enam. Akukho ncedo ekuphikiseni le ngongoma ngokwenene.
Andizukuphikisana. Luluvo lwakho kwaye ndingomnye okholelwa ukuba unelungelo lokwenza oko. Ewe ndicinga ukuba awunangqondo, kwaye ngokufanayo ndinelungelo lolo luvo, kodwa zozibini zizimvo kwaye akukho nto bayokulwa * ngayo, akunjalo? 🙂
@Myk: Ngaba zikhona iintengiso kwiincwadi ozifundileyo?
Ewe, abizwa ngokuba “ziiMagazini.” 🙂
Isimanga kukuba bendizolo ndiphanda intengiso kwiimagazini kwaye ndafumana uphando kumagazini.org ebonisa zonke izibalo zibonisa ukuba abafundi abaninzi beemagazini bajonga iintengiso njengezinto ezibalulekileyo kwimagazini, ngakumbi xa ezo ntengiso zijolise kufundo.
@Andiyithandi intengiso kuthotho lwam lweTV. Yiyo loo nto ndithenga iiDVD. Andikuthandi ukuhlala isiqingatha seyure sentengiso ngaphambi kokuba i-movie iqale, yiyo loo nto ndithenga iDVD.
Uthelekisa ii-apile kunye neeorenji ngeendlela ezininzi. Ndiyakuxelela ukuba ungazithandi iintengiso ngenxa yokuba umiselwe ukungazithandi, kodwa abantu abaninzi abazithandi, njengam, kuba iintengiso zeTV zibeka ixesha labo. Iintengiso zebhlog aziphazamiseki kangako kunoko kwaye (ngaphandle kweentengiso ezivelayo) musa ukuchitha ixesha labantu, ngaphandle kwabo bantu bakhetha ukuchitha ixesha labo bekhumbula ngaphezulu. '-)
@Myk: Andikholelwa simahla kuyo yonke into ngeendleko zokuphelisa ibhlog yakho ngentengiso yomntu wesithathu embi.
Kulungile kwiiblogi ezininzi: "Ngaphandle koko uNksk. Lincoln, bekudlalelwa njani?"
@Myk: Ndikulungele ukuchitha imali. Kuphela ndingathanda ukuyinika ngqo iDoug endaweni yokuhamba ngokungacacanga? Cofa kumajelo?.
Uqikelelo lwam kukuba usembalwa. Ukuba akunjalo, kunokuba kufanelekile uDoug kunye nezinye iibhlog zokuphuhlisa iziseko eziyimfuneko ukuxhasa olo khetho, kodwa kuya kufuneka ukuba lukhetho kuba ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwe-90% ayinakuhlawula. Ndiyathandabuza ukuba kukho abantu aboneleyo abaya kwenza ukuba ukuphuhliswa kwezibonelelo kuluncedo, kodwa ndinokuba ndiphosakele kwaye ngekhe ndizifake ekubambeni into efunwa ngomnye umntu.
@Myk: Kuyinyani, andiyithandi indlela yokwenza izicwangciso zokwenza imali eziye ngaphambili kublogi. Ke ngoku, ukuba yile ndlela le bhlog eya kuhamba ngayo, kulungile. Ayisiyiyo le nto ndifuna ukuyenza kubhloga kwaye ndicinga ukuba ndinelungelo lokwenza into ngeemvakalelo zam… ndingakuvuyela ukuhlawula umrhumo wobhaliso wale bhlog (ngaphandle kokuba, njenge $ 300 ngenyanga). Ngoku, ndiyaqonda ukuba kuya kubakho ibutho labantu elingangxoli ngenxa yokuba likwi-intanethi kwaye lisimahla.
Unelungelo lokuthatha amanyathelo kwiimvakalelo zakho, ukuba nje izenzo zakho zisemthethweni! (umzekelo, ukuqhushumbisa indlu kaDoug ayizukuba yindlela efanelekileyo yokwenza ezo mvakalelo, kunjalo. as Kodwa njengomntu othanda ukufunda indalo yomntu ndizifumanisa zisecaleni kwakho. Kubonakala ngathi ukhule unamathele kwimiba. wento eyayitshintsha kwaye ngoku sele iguqukile awuyithandi nangona ukuhlala kwayo ngendlela eqale ngayo akunangqondo.
Imbali inemizekelo emininzi yokungaphazanyiswa, kwaye yonke iyimibhalo esemazantsi kwimbali. Umzekelo, kukho abo babezithiyile iiCD kuba bekhetha ivinyl, kodwa ukungoneliseki kwabo akuzange kuthintele ngokungathandabuzekiyo utshintsho kumculo ofakwe ngekhowudi. Similary abo bathiye intengiso kwiiblogi abayi kubangela ukuba iibhlog zibuyele simahla; ukubhloga ingxaki enkulu yokwenza kakuhle (Ndiyazi, ndizamile kwaye andiyenzi kakuhle!) ukuba abantu badinga inkuthazo yezoqoqosho ukuyenza kakuhle. Kwaye unikwe lonke olunye ukhetho umfundi analo, iimodeli zokubhalisela azisebenzi kodwa iimodeli zentengiso ziyasebenza. Nditsho neNew York Times ihambele kwintengiso; I-NYT ifumanise ukuba ingqalelo ibaluleke kakhulu kunokhuseleko: http://www.mikeschinkel.com/blog/attentionhasbecomeworthmorethanprotection/ (Kodwa awungekhe ufune ukulandela ikhonkco kuba ndineentengiso kwiphepha.)
Ngapha koko, eyona nto iphambili kwimpikiswano yam kukuba ukungazithandi iintengiso kuyakuchaphazela (kunye nabo baneemvakalelo ezifanayo) kwaye kukuchaphazela kakubi; NGOKU nguwe okhululekileyo kwiimvakalelo okhethe ukuba nazo. Kukho intetho yakudala ethi “Indoda yakhatywa ngamanqe. Uqwalasele umthombo kwaye waqhuba ishishini lakhe. ” Unokusebenza malunga neentengiso kwiiblogi kwaye uzibangele ukuba ube nentliziyo ebuhlungu, okanye ungayamkela nje.
Uthe "Musa ukuphikisana nenqaku" ke ucinga ukuba ndiyaphikisana naloo nto kanti andiyiyo. Ndixoxa ngombandela wokucaphuka malunga nento eguqukileyo kwaye engazukutshintsha ibuyele kwindlela yakudala kwaye ukuba oko kunciphisa kuphela njani umgangatho wobomi bomntu ocaphukisayo. Lilonke, ukuba ufunda ukwamkela le nguqulelo, uya kuba ngumntu owonwabileyo.
Novemba 24, 2007 ngo-4: 07 PM
Ndisusile intengiso ende ngaphezulu kwiphepha lam elinye, ukufumana indawo ethe kratya kwintengiso zangoku!
Novemba 24, 2007 ngo-9: 07 PM
INDLELA YOKUBONISA UKUHLEKA! Isithuba sakho sivakala ngathi uzama ukuthethelela indawo yakho kancinci kakhulu! '-) Ukwenza into enkulu kangaka nje kutsalela ingqalelo kwinyani. Yenza nje kwaye uqhubeke. Ukuba abantu bafuna ukuntywila ngayo, kulungile yingxaki yabo.
I-BTW, ndingathanda ukusebenzisa umnini weKia kwiarhente yokuthengiswa kwezindlu; Ndabona ukuba banethuba elingcono lokuziphatha kakuhle. Ngaphandle koko, ngubani oqhuba iCadillac namhlanje unayo nayiphi na iklasi? Ewe, ngaphandle kukaKate Walsh… '-)
Novemba 24, 2007 ngo-10: 02 PM
Ngokuqinisekileyo, uMike. Ngokuqinisekileyo bendifuna ukuthethelela iintengiso-kwixesha elidlulileyo bendihlala ndigxeka abantu abaqhuba iintengiso kwiphepha labo lasekhaya. Ndenze, nangona kunjalo, ndikhathalele ukubekwa kulo mxholo.
Andiqondi ukuba kukho ubudlelwane phakathi kwenzuzo kunye neenqobo ezisesikweni- kwaye ndiyayithanda i-CTS entsha kwaye ndingathanda ukuqhuba enye… kodwa iyakuba yiminyaka embalwa ngaphambi kokuba ndimoshe imali kwimoto yodidi - ukuba ikho.
Novemba 24, 2007 ngo-10: 33 PM
Yhu, ndifuna ukuthi “zilinganiseHayi "zizathu'(Doh! 🙂
Kwaye malunga nenzuzo kunye nokuziphatha, mhlawumbi bendimane ndigxeka uluvo lwam olucingelwayoiinwele eziluhlaza okwesibhakabhaka eCadillac”Isuntswana kakhulu (isicatshulwa esithathwe kwindawo yentengiso yerediyo yasekuhlaleni malunga neearhente zezindlu.
Ngapha koko, ibhlog enkulu (ngaphandle kwale post '-p)